Anti-Spam Talooyin si aad u ilaaliso Email aad & mdash; Tilmaan-bixinta laga bilaabo Semptarka
Dadku waxay bilaabeen isticmaalka "spam" buuggan, tan iyo markii ay bilaabeen isticmaalka emails. Si kastaba ha noqotee, dadku ma wakhti qaataan si ay u fahmaan waxa spam u baahan. In luuqada layman, spam waa nooc ka mid ah email khariidad, taas oo inta badan aan loo baahnayn by qaataha - winter turbans. Qofka qaata wuxuu caadi ahaan helayaa fariimahan emailka ah anigoon ogolaan. Emaylada spam waxay caadi ahaan leeyihiin farriin keliya taas oo lafteeda ka kooban, qaar ka mid ah xayeesiin iyo xayaysiin dhiirrigelin ah. Dad dhowr ah ayaa laga yaabaa inay helaan isla isla email iyagoon oggolaan.
Maareeyaha Guusha Macaamiilka Semt , Oliver King, wuxuu siinayaa aragti ah inuu kula dagaallamo e-mailka iyo hanjabaadaha phishing.
Spammers waxay isticmaalaan habab dhowr ah si loo hubiyo in ay gaaraan bartilmaameedkooda. Kuwaas waxaa ka mid ah: liiska la iibsaday ee cinwaanada, soo bandhigida tartanno been abuur ah si ay u soo gudbiyaan dadka isticmaala macluumaadka gaarka loo leeyahay oo bixiya adeegyo lacag la'aan ah. Xaaladaha kale, barnaamijka email-goosashada ayaa wax ka qabta uruurinta iyo saarista cinwaanada ka yimid boggaga internetka qaarkood.
Waa maxay sababta Spam Mail in ka badan buuq
Waxaa jira sababo badan oo la siiyay dadka isticmaala sida ay tahay in ay iska ilaaliyaan dhexgalka emaylka spam. Si kastaba ha ahaatee, dhibka ugu weyn ee dhammaantood waa in dhibbanaha uu halis u yahay xatooyada aqoonsiga, ama u ogolaanaya inuu weerarka ku rakibo fayrus ama nacaybka kombuyuutarkooda. Qaar ka mid ah jilayaasha kale ee ba'an ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan aqoonsiga qofka si ay u galaan dambi..Marka la qabto, raadku wuxuu dib ugu celiyaa milkiilayaasha dhabta ah, xitaa inkastoo aysan ku lug laheyn denbiga. Sababaha ugu caansan waa lacagta la dhaqay ama la xakameynayo walxaha la soo xaday. Xaaladda ugu wanaagsan ee qofka loogu talagalay farriinta spam ee emailkooda ayaa noqon doona inuu tirtiro iyada oo aan la furin.
Sida caadiga ah suulka, qof walba waxaa laga codsanayaa inuu sii wado si toos ah dalabyada internetka si looga fogaado farriimaha spam. Haddii wax laga yaabo inay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan, markaa waxay u muuqataa inay tahay mid aad iyo aad u dheer oo ay u socoto si tartiib tartiib tartiib ah iyo dalabyo.
Ka Ilaalinta Spam Mail
Mararka qaar ka ilaalinta habka emailka spam ah waxay u muuqdaan kuwo aan macquul ahayn ama adag. Waxaa jira rajo yar, si kastaba ha ahaatee, si loo yareeyo, ama xitaa tirtiro qadarka spam ee riixaya shakhsi ahaan sanduuqa shaqsiga iyada oo loo marayo isticmaalka software-ka anti-spam. Iyada oo sirta sirta ah ee horumarinta, software-ka hadda anti-spam si toos ah u falanqeynaya farriimaha ugu habboon iyo kan sharciga ah iyo kuwa akhriyaya sida spam. Waxay u baahan yihiin faragelinta aadanaha ee ugu yar inay sidaas sameeyaan. Kiisaska yar ee barnaamijka uu ku guuldareysto inuu dhamaystirto farriimaha spam gebi ahaanba, shakhsi ayaa ku tilmaamaya farriinta mid ahaan, filtarrada isla markiiba cusbooneysiiya oo la qabsashada sida spam.
Hirgelinta xirmadda internetka ee habboon ee internetka waxay xaqiijinaysaa dhimista khatarta la xariira boostada spam. Waxay sifeeyaan dhamaanba spam ka fog sanduuqa, iyo dhammaan faylasha ayaa loo arkey inay muhiim tahay. Muuqaal dheeraad ah ee barnaamijyadani waa ka difaacidda phishing for scenarios taas oo e-mail u muuqata mid sharci ah, laakiin ma aha. Waa muuqaal muhiim ah oo ka mid ah qalabka anti-spam.
Bixinta Barnaamijka Badbaadada iyo Waxyaabaha Muhiimka ah
Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay soo qaataan software-ka anti-spam oo la yimaada difaac ka hortagga fayraska oo ah xidhmo marka ay tagaan dukaamada. Sababta ayaa ah in fariimaha qaarkood ee spam ay la socdaan fayrasyada iyo dhibaatooyinka kale ee waxyeellada leh. Hal kumbuyuutar oo keliya ayaa awood u leh helitaanka kombuyuutarka iyada oo sidoo kale hagaajinaysa nidaamka kalsoonida. Noocyada anti-spam waxay dirayaan farriimaha laga soo galo sanduuqa. Dareeb dheeraad ah oo antivirus ah sidoo kale waxay hubisaa in mid ka mid ah la ilaaliyo xitaa haddii ay dhacdo fariin fariin rasmi ah fariin.